INTER MILAN VS FIORENTINA: Shaxda & safafka ay caawa kusoo gelayaan! – Gool FM
INTER MILAN VS FIORENTINA: Shaxda & safafka ay caawa kusoo gelayaan!
(Milano) 20 Agoosto 2017 – Waxaa caawa hal mar la wada ciyaarayaa kulamada harsan ee horyaalka Talyaaniga oo shalaytoole furmay, saacaddu marka ay tahay 20-45 xilliga Talyaaniga, kooxaha dheelaya waxaa ka mid ah Inter Milan oo soo dhowaynaysa AC Fiorentina.
Dhanka Inter: Spalletti ayaa doonayo inuu lasoo shirtago isla 11-kii garaacay Betis Sevilla isagoo Dalbert keenaya isla daqiiqadda 1-aad. Daafaca waxaa ka horreeya Gagliardini iyo Vecino, halka Borja Valero uu yahay lambarka buuxa isagoo booska ka xoogey Joao Mario.
Dhanka Viola: Macallinkii hore ee Inter ayaa kulanka San Siro Pioli aan ku tashanaynin Federico Chiesa oo ganaaxan. Saponara looma yeerin, Badelj weli ash ma aha, wuxuuse soo safayaa wiilka cusub ee Simeone. Waxaa maqan Biraghi iyo Mati Fernandez, sidoo kale Kalinic oo maanta Milan ku biiraya.
Steven Gerrard oo weeraray qaab ciyaareedka Ozil ee Arsenal
CROTONE VS AC MILAN: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan!